"धेरै अक्सर बिरामी सर्दी. के गर्न?"जवाफ छ,!
तपाईं यहाँ: घर सुझाव "धेरै अक्सर बिरामी सर्दी. के गर्न?"जवाफ छ,!
बाल्यकाल देखि हामी सबै पूर्ण अप्रिय चिसो लक्षण थाहा: prostration, तापमान, चिसो, खोकी, aching हड्डी र अन्य यस्ता "आकर्षण". वयस्क सामान्यतया कम अक्सर बिरामी, छोराछोरी भन्दा, तर तपाईं भन्न सक्नुहुन्न, यो सामान्य चिसो भाइरस र संक्रमण सुरक्षित गर्न सजिलो छ कि.
हामी कुरा हुनेछ आज, को बस निको आउन पछि कसरी रोग को प्रारम्भिक फिर्ती रोक्न. जटिलताहरू - साधारण चिसो सबैभन्दा अप्रिय भाग, किनभने उनीहरू पुरानो रोग को एक worsening प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ, र नयाँ रोग को viscera को विकास को लागि नेतृत्व. हाम्रो साइटमा सर्दी र फ्लू chiayte लेखको रोकथाम र उपचार मा – http://forcys.ru/article/chastye_prostudy_u_vzroslyh-74/.
त्यसैले, जटिलताहरू र रोग पुनरावृत्ति को जोखिम उच्च छ, यदि:
रोग कम गरिएको छ जब तापमान - शरीर गरेको प्रतिरक्षाको र प्रतिरक्षा को गिरावट को एक चिन्ह;
तपाईं अब लागि बिरामी 7-10 दिन, र सुधार अस्थायी हो;
यो सास को shortness देखा;
खोकी विकसित र यथावत्.
यदि तपाईं उपचार प्रयोग विधि व्यवहार मा आफ्नो लायक सिद्ध छैन,, तपाईं पहिलो डाक्टर भ्रमण पर्छ. शायद, वा अदक्ष वा अनुचित तयारी को मामला मा, गलत उपचार आहार, वा आफ्नो शरीर को गहिरो समस्या मा.
नोट, मनोवृत्ति पनि रिकभरी गति मा एक धेरै ठूलो प्रभाव छ. अधिक निराशावादी आफ्नो भित्री आत्मा, को कमजोर तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली. साथै, शरीर उचित आराम आवश्यक, अन्यथा यो संक्रमण र सफल क्यारियर सुरक्षित गर्न बल हुनेछ जहाँ?
सर्दी को जटिलताहरू otitis हुन सक्छ, sinusitis, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, र यी अवस्थाको कुनै पनि उपचार थप बल आवश्यक हुन सक्छ, जटिलताहरुलाई विकास रोक्न क्रममा आफ्नै स्वास्थ्य बारे हेरचाह भन्दा.
वाक्यांश "अक्सर बिरामी सर्दी भने, के गर्न - तपाईं बारेमा थाहा छैन ", गम्भीर कदम लड्न सर्दी गर्न तुरुन्त गर्नुपर्छ. प्रभावकारी polyphenol जटिल संग lozenges - यो नयाँ दबाइ Fortsis मदत गर्नेछ.
यी पदार्थ भाइरस र ब्याक्टेरिया enveloped छन्, तिनीहरूलाई सार्न अनुमति छैन, रोग थप प्रगति रोकेको. त्यो किन प्रभावकारिता छ Fortsis, धेरै फार्मेसी लागूपदार्थ तुलना, धेरै उच्च.
Fortsis मद्दत आफूलाई बचाउन र मौसममा चिसो बाट व्यक्तिहरूलाई प्रेम र छिटो रोग संग भागमा बल दिन, संक्रमण पहिले नै देखा परेको छ भने. Fortsis - ती लागि एक आधुनिक दबाइ, जो सर्दी बाँच्न चाहन्छ!